Oman Visa | I-Visa yabakhenkethi eya eOman | natvisa.com
Isicelo seOman Visa esikwi-Intanethi
Ipolisa iRoyal Oman Police (ROP) lazise ngeVisa abakhenkethi, eyinkqubo ye-elektroniki yokufumana i-visa. Le yinkqubo elula kakhulu, ethi iphelise isidingo sokundwendwela kwindlu yozakuzo kwaye ulinde ixesha lokudibana. Into ekufuneka beyenzile kukukhetha usuku lokuhamba kwaye baqale inkqubo yabo yokundwendwela. Inqanaba lokuqala lale nkqubo kukugcwalisa iphetshana lesicelo, ungenisa amaxwebhu afunekayo kwaye ekugqibeleni wenze intlawulo.
Abahambi abenza isicelo sokundwendwela i-Oman kufuneka babe nala maxwebhu alandelayo-ikopi ekhutshiweyo ye ipaspoti kunye nomfaki-sicelo photo.
Ukuba abafaki-zicelo bavela kumazwe athile, kufuneka babonelele nge-visa okanye imvume yokuhlala - Schengen Area, United States of America, United Kingdom, Canada, Japan, Kyrgyzstan, Laos, Maldives, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Tajikistan, Australia, IAlbania, iArmenia, iAzerbaijan, iBelarus, iBhutan, iBosnia neHerzegovina, iCosta Rica, iCuba, iEl Salvador, iGeorgia, iGuatemala, iHonduras, iIndiya, iKazakhstan, iTurkmenistan neUzbekistan. Ukusilela ukubonelela ngala maxwebhu kunokukhokelela ekungavunyelweni kwesicelo se-Visa.
Abafaki-zicelo kufuneka babe ne-imeyile eyi-Id esemthethweni. Bayacelwa ukuba babonelele ngale ID nge-imeyile ngelixa besenza isicelo se-eVisa. Nasiphi na isaziso esimalunga nokungqinisisa okanye ukwala isicelo se-Visa ziya kuthunyelwa kule imeyile. Ke ngoko, i-id idilesi enikezwe ngabenzi-sicelo kufuneka isebenze kwaye ifikeleleke kubo.
Abafaki-sicelo kufuneka babe nepasipoti efanelekileyo yokufaka isicelo se-eVisa e-Oman. Kufuneka isebenze ubuncinci iinyanga ezi-6. I-visa evunyiweyo iya kuvumela zombini ukungena kunye kunye nokungena. Nge-visa, iindwendwe zingahlala kweli lizwe kangangeentsuku ezili-10, iintsuku ezingama-30, okanye iintsuku ezingama-90 okanye unyaka omnye, kuxhomekeke kuhlobo lwevisa eyenzelwe isicelo.
Abatyeleli kufuneka babonelele ngobungqina ngendawo yokuhlala ngexesha lokufaka isicelo se-eVisa. Obu bungqina bunokuba ziinkcukacha zobhaliso ehotele, iinkcukacha zokubhukisha okanye nawaphi na amanye amaxwebhu aya kungqina amalungiselelo endawo yokuhlala.
Kuvunywa uOman Visa
Ukungena e-Oman ngaphandle kwengxaki, qiniseka ukuba i-visa yakho ye-Oman yamkelwe kwaye iprintiwe. Abasemagunyeni baya kujonga uxwebhu olo.
Abahambi bayacelwa ukuba babonise abasemagunyeni kwisikhululo seenqwelomoya amaxwebhu abo okuhamba. Kuya kufuneka bangenise ipasipoti yabo enesigunyaziso seenyanga ezi-6 okanye nangaphezulu.
Abatyeleli kufuneka babonise ubungqina bendawo yokuhlala, enokuba ziinkcukacha zabo zokubhukisha kuyo nayiphi na ihotele okanye indlu yeendwendwe.
Ukufika kwabo e-Oman, iindwendwe kufuneka zinike itikiti labo lokubuyela kumagosa okufudukela apho.
Iinkcukacha ze-Oman Visa
Yintoni i-Oman eVisa yabakhenkethi?
Inkqubo yokufumana i-visa yelinye ilizwe elifana neOman ihlala yinde kwaye intsokothile. Kubandakanya ukutyelelwa kwindlu yozakuzo izihlandlo ezininzi, ukujongana nokusebenza kwamaphepha amaninzi kunye nokuchitha ixesha elininzi kunye nemali ukufumana nje uxwebhu lokuhamba. Nangona kunjalo, ngoFebruwari 2018, inkqubo ye-intanethi yaziswa ngamapolisa aseRoyal Oman (ROP), eye yavumela abemi bamazwe angaphezu kwama-71 ukuba bafumane ii-visa zabo kwi-Intanethi. Ngale nkqubo intsha ikhoyo, ukucwangcisa abakhenkethi abatyelele i-Oman banokuyifumana ngokukhawuleza i-visa yabo ngokukhawuleza.
Inkqubo ye-eVisa yinkqubo ekwi-intanethi yokufumana i-visa, apho kufakwa khona isicelo sokungena kwi-visa ukuyifumana, inkqubo iqhutywa ngokupheleleyo kwi-intanethi.
Ungasifaka njani isicelo seOman Visa kwi-Intanethi?
Inkqubo yokwenza isicelo sevisa yenziwe lula kubakhenkethi abatyekele ekutyeleleni iOman. Akukho mfuneko yokuba bajongane nobunzima bokundwendwela indlu yozakuzo okanye bachithe ixesha elide belindile emigceni. Kufuneka ulandele amanyathelo amathathu ukufumana i-eVisa yakho. La manyathelo ngala:
Gcwalisa ifom yesicelo: Abahambi abenza isicelo sevisa kufuneka bagcwalise ifom yesicelo. Ukufumana ifom yesicelo kulula kakhulu njengoko unokuzikhuphela kwiwebhusayithi karhulumente. Gcwalisa lonke ulwazi ngokucacileyo kwaye uqhubekele kwinqanaba elilandelayo.
Ungeniso lwamaxwebhu: Inyathelo elilandelayo lenkqubo yokwenza isicelo se-visa e-Oman kubandakanya ukungeniswa kwamaxwebhu. Amaxwebhu kufuneka atshekishwe kwaye alayishwe. Kubalulekile ukuqinisekisa ukuba ukuskena kwenziwa ngokucacileyo.
Yenza intlawulo: Okokugqibela, kuya kufuneka uyigqibe inkqubo yokwenza isicelo sevisa ngokuhlawula umrhumo wevisa. Le mali inokuhlawulwa kusetyenziswa ikhredithi okanye ikhadi lebhanki, ezizezona ndlela zokuhlawula zintle ezikhoyo.
Kucetyiswa ukuba uprinte uxwebhu olo, ulibonise amagosa akhoyo apho. Emva kokuba amaxwebhu sele ekhangelwe, iindwendwe zinokungena e-Oman.
Imiyalelo yabafakizicelo Ukufaka isicelo seVisa eya kuOman
Abatyeleli abangena e-Oman kwi-eVisa yabakhenkethi abavunyelwe ukuba bathathe nawuphi na umsebenzi ohlawulayo ngexesha lokuhlala kwabo kweli lizwe.
Ngelixa ukungena ngokukodwa kufumaneka kubantu bamazwe amaninzi, ukungena kwamaphepha amaninzi kufumaneka kuphela kubantu bamazwe athile. Ke, kucetyiswa ukuba ujonge phambi kokufaka isicelo.
Yintoni i-Oman iTyelelo lwe-eVisa?
Amapolisa aseRoyal Oman (ROP) asungule inkqubo ye-eVisa ngoFebruwari 2018, evumela iindwendwe ukuba zenze izicelo kwaye zifumane i-visa yazo kwi-intanethi, ngaphandle kwesidingo sokuya kwindlu yozakuzo.
Lithini ixesha lokunyaniseka kwe-Oman eVisa?
Emva kokunikwa kwe-eVisa, isebenza ixesha leentsuku ezili-10, 30, okanye ezingama-90 okanye unyaka omnye, kuxhomekeke kuhlobo lwevisa ekucelwe kuyo.
Ngawaphi amaxwebhu ayimfuneko ukufaka isicelo se-Oman eVisa?
Amaxwebhu afunekayo ukuba angeniswe kunye nesicelo sakho se-visa yile-ikopi esencwadini yokundwendwela, ifoto yomenzi-sicelo, ubungqina bendawo yokuhlala kunye nevisa okanye imvume yokuhlala, ukuba ngaba bangabemi bamazwe akhethiweyo.
Ngaba ndifuna ukuveza naluphi uxwebhu, xa ndifika kuOman?
Ukufika e-Oman, kufuneka ubonise-iVisa yase-Oman evunyiweyo, ipaspoti, itikiti lokubuya kunye nokubhukisha ehotele.
Athini amaxwebhu ekufuneka angeniswe njengobungqina bendawo yokuhlala?
Njengobungqina bendawo yokuhlala, abafaki-zicelo kufuneka banikezele ngeenkcukacha zabo zokubhukisha zehotele, indlu yeendwendwe okanye yehostele abakhethe ukuhlala kuyo, kumagosa okungena.
Mangaphi amangenelo avunyelweyo yi-Oman eVisa enye?
I-eVisa esebenzayo ye-Oman ivumela zombini, ungeniso olunye kunye noluninzi.
Yeyiphi imeko ekufanele ukuba ipasipoti yam ihlangane ukuze ifake isicelo se-Visa kuOman?
Ngaphambi kokuba ufake isicelo se-eVisa e-Oman, qiniseka ukuba unencwadana yokundwendwela esemthethweni esebenzayo iinyanga ezi-6 okanye nangaphezulu.
Zeziphi iindlela zokuhlawula eziqhelekileyo ezikhoyo zokuhlawula umrhumo we-Oman eVisa?
Unokukhetha ikhredithi efanelekileyo okanye imali oza kuyihlawulela i-Oman eVisa.
Ndingalufumana njani ulwazi malunga nobume bam bevisa?
Emva kokuba isicelo senziwe, i-imeyile iya kuthunyelwa kuwe, ikwazise ngesimo sakho sevisa.
I-visa yakho iya kuthunyelwa ngeposi emva kokuba yamkelwe. Kuya kufuneka uyikhuphele kwaye ufumane iprintawuthi.